विलासितामा लिप्त प्रदेश २ सरकारबाट सबै मुक्ति चाहन्छन् सहमतिमा उल्लिखित सहकार्य शब्दले विशेष अर्थ राख्छ । हामीले नेकपाको पहिलेको रबैयाका कारण समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ । अब स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । यही स्थिति रह्यो भने हुन सक्छ हामी संघीय सरकारमा समेत सामेल हुन सक्छौँ अन्तर्वार्ता२९ माघ २०७६
शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुने स्ववियु आवश्यक छ अन्तर्वार्ता२३ माघ २०७६
४९ देशमा छ एमसीसी परियोजना, हामी किन डराउने ? वास्तवमा एमसीसी परियोजना लागू भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने हो त ? यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो त ? सम्झौता गर्दा नेपाल तल परेकै हो अन्तर्वार्ता . समाचार१४ माघ २०७६
निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण अनुकूल बन्दै छ विमानस्थल निर्माणमा केन्द्र सरकार अग्रसर देखिएकाले यी चुनौती सहजै समाधान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सरकार कुनै हालतमा निजगढमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छ । त्यसैले आशंका गर्नु हुँदैन । अन्तर्वार्ता३ माघ २०७६
नेकपाले बागमतीमा ह्वीप लगायो, हामीले विवेक गुमायौं प्रदेशसभा मात्र होइन, संघीयतामा जाँदा पनि अध्ययन अनुसन्धानमार्फत यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी गएका होइनौं । हाम्रो संघीयताको सुरुवात बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश नाम राख्ने गरी हाम्रो बहस सुरु भएको होइन अन्तर्वार्ता१ माघ २०७६
पत्रकार कुटपिट लाजमर्दो घटना हो लालकिशोरजी मेयर भएदेखि नै सबै समुदाय, सम्प्रदायलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुभएको छैन । पत्रकारका पनि आफ्नै नैतिकता हुन्छन् त्यसलाई पत्रकारहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ अन्तर्वार्ता२९ पुस २०७६
कांग्रेस सपार्न अब युवानेता नै चाहिन्छ (भिडियोसहित) केन्द्रीय समिति बहिष्कार गर्दै सभापतिहरूसँगको छलफल सुरु गरेपछि पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमबारे शिलापत्रकर्मी प्रदीप बस्नेतले युवा नेता उदयशमशेर राणासँग कुरा गरेका छन् । राणासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश अन्तर्वार्ता२२ पुस २०७६
सात महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइनँ काठमाडौंमा हुँदा धेरैजसो म पार्टी कार्यालयमै सुतें । दिनभर राजनीतिक काम, सुत्ने बेलामा पार्टी कार्यालयमा मेरो बास हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताको घरमा पनि बसें । अहिले पनि विराटनगरमा मेरो सानो घर छ । काठमाडौंमा डेरा बस्न थालेको ४० वर्ष हुन थाल्यो । पहिलो पटक मन्त्री हुँदा डेरा राखेर गएको थिएँ । तर, यसपालि भने डेरा छोडेर मन्त्री क्वार्टर गएको हुँ अन्तर्वार्ता१३ पुस २०७६
‘नेपालको स्वाभिमान जोगाउन पृथ्वीनारायण शाहजस्तै बन्नुपर्छ’ मधेशकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल) का अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो बोलीका हिसाबले ‘खरो नेता’का रूपमा चिनिन्छन् । खासगरी मधेशका पक्षमा उनको नीति र बोली कडा हुन्छ । अन्तर्वार्ता७ पुस २०७६
सरकार अलोकप्रिय भयो, त्यसैले हाम्रो जनमत बढ्यो सरकारलाई साइजमा ल्याउने सन्दर्भमा गुठी विधेयक फिर्ता गराउन सकियो । चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै गर्दा डा.गोविन्द केसीको अनशन, कांग्रेसको विरोध र सडक प्रदर्शनपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो अन्तर्वार्ता२६ मंसिर २०७६
योजना निर्माणमा केन्द्र सरकारको मानसिकता छुद्र छ महानगरमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । सबै वडामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको व्यवस्था भइसकेको छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति अझै पनि कम छ अन्तर्वार्ता२५ मंसिर २०७६
दूधवाली भन्दा नमज्जा लाग्थ्यो मैले पनि कहिलेकाहीँ दूध घरघरमा पुर्‍याउनुपर्थ्याे, जसले गर्दा कलेज जान पनि अबेला हुन्थ्यो । त्यसैले साथीहरू पनि दूधवाली भनेर जिस्क्याउन थालेका थिए । खेलकुद . अन्तर्वार्ता२५ मंसिर २०७६
सागले नेपालको शान बढाएको छ हामीसँग ३ सय १७ वटा स्वर्ण छन् । आजसम्म १ सय १० को हाराहारीमा स्वर्णको छिनोफानो भएको छ । यसको अर्थ, अझै २ सय स्वर्ण बाँकी नै छ । मैले त ५० स्वर्णलाई पनि न्यूनतम भनेको छु । २ सयमध्ये अझै धेरै स्वर्ण हाम्रो नाममा हुनेछ अन्तर्वार्ता१९ मंसिर २०७६
१३औं सागमा दोस्रो हुने हाम्रो लक्ष्य हो १२औं संस्करणसम्म आइपुग्दा हामीले सागबाट ७९ वटा स्वर्ण निकालेका छौं । १९९९ मा आयोजित आठौं सागमा १२ गेम थिए । त्यसमा हामीले ३१ वटा स्वर्ण पदक जित्यौं साग विशेष-२०७६ . अन्तर्वार्ता११ मंसिर २०७६
नेपाल बैंकले अब बैंकिङ क्षेत्रकै नेतृत्व गर्छ, सेयरधनीलाई दिगो लाभांश दिन्छ बैंकिङ क्षेत्रको औसत वृद्धि जति हुन्छ, नेपाल बैंकको वृद्धि त्योभन्दा बढी हुन्छ । त्यो किन सम्भव छ भने हामी अहिलेसम्म बजारमा गएका छैनौं । अब बजारमा जान्छौं । र, सेयरधनीलाई दिगो लाभांश दिने हाम्रो लक्ष्य छ बैंक/बीमा . अन्तर्वार्ता४ मंसिर २०७६
सरकार उपस्थित नहुँदा सम्प्रभुतामा खलल भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि देशभर त्यसको विरोध भइरहेको छ। पत्रपत्रिकाबाट . अन्तर्वार्ता . समाचार२६ कात्तिक २०७६
कात्तिक अन्तिमसम्म समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छः राजेन्द्र महतो समाजवादी पार्टीकुनै हालतमा यो सरकारमा अब बस्छ जस्तो लाग्दैन । कात्तिक ३० गतेसम्म सरकारबाट उहाँहरू हट्नुहुन्छ । त्यसपछि एकीकरणमा थप सहयोग प्राप्त हुन्छ अन्तर्वार्ता१० कात्तिक २०७६